Deschamps Miyuu Ku Wareeray Xulka Faransiiska? – Garsoore Sports
Deschamps Miyuu Ku…
Waxaa la sheegayaa in xulka Les Bleus ay tahay inay cayaarto qaab weerar badan laakiin taasi maahan sida kubadda-cagta caalamiga ah u shaqeyso, tababarahooduna wuu ogyahay.
Waxaa jiray wax yar oo dhaliil ah wixii ka dambeeyay guushii Faransiiska ee 1-0 ay ka gaareen Jarmalka fiidnimadii Talaadada.
Dadka qaar ayaa u arka in guushaasi ay ahayd mid weyn oo lahayd muhiimad gaar ah laakiin kuwa kale oo badan waxay u ahayd caddeyn dheeri ah oo ay ku caddeeyanayaan in Didier Deschamps uu u cayaaro si baqdin leh isagoo lagu eedeynayo inuu kooxdiisa weerarka ah aanu u adeegsan si weerar ku dheehan.
Waa eedeyn caan ah hadda, inkastoo ay qariib tahay maadaama marka la fiiriyo uu Deschamps ku guuleystay Koobka Adduunka seddex sano kahor waxaa uu sii wadaa wadadii ahayd inuu leeyahay istiraatiijiyad guuleed oo aan macquul aheyn.
Laakiin marka laga fiiriyo Deschamps ayaa laga badiyay kaliya labo ka mid ah 24 kulan tan iyo bilowgii Koobka Adduunka 2018, walwal kasta oo ku saabsan gool walbana waxay ka tarjumeysaa maskaxda dadka daawadayaasha dhexdhexaadka ah halkii ay ka ahaan lahayd dabeecadda ama xasilloonida taariikhiga ah ee xulka kubbada-cagta Faransiiska.
Mar marka qaar, daawashada xulkan jamaahiiirtooda walwal ayay ku beertaa iyagoo sida muuqata u fikiraya, haddana taasi maaha sida ay kooxdan Faransiiska u fikireyso. Waxay yaqaanaan sida loo xajiyo luuqda, sida loo xakameeyo laxanka cayaarta si ka duwan sida kooxaha kale.
Deschamps waa in lagu ammaano, oo aan lagu dhaleeceynin dejinta istiraatiijiyad xeeladeed oo aan kaliya sida cad guusheeda muuqan balse muran la’aan waa habkiisa ugu wanaagsan ee ugu macquulsan ee uu xulkan ku leylin karo.